I-GNOME 40 beta ngoku iyafumaneka | Ubunlog
Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo, Ngoluhlu lokuposa, UAderrahim Kitouni, ilungu leqela lokuphuhlisa imeko yendalo, Ndenze isibhengezo sokukhutshwa kwenguqulo ye-beta yeGnome 40 esele ifumaneka eluntwini kunye nabo banomdla wovavanyo, ukunceda iqela laseGnome ukuba lichonge zonke iimpazamo kunye nokusilela okunokwenzeka.
Intengiso kuza inyanga phambi kokukhutshwa kwengxelo ezinzileyo yemo engqongileyo desktop kwaye phakathi kokuphuculwa okukhankanyiweyo, ezi zijolise ekunikezeleni i-ergonomics enkulu kwindawo yokusebenza, ubukhulu becala isekwe kunxibelelwano oluhlala lunxulunyaniswa neepilisi.
Inguqulelo ye-beta yeGNOME 40 iyafumaneka ngoku. Ikwaphawula ukuqala konxibelelwano lomsebenzisi, ukusebenza, kunye ne-API yomkhenkce (ngokudibeneyo kubizwa ngokuba yi "The Freeze"). Naluphi na utshintsho lwejelo kufuneka lubhengezwe kuluhlu lwe-imeyile lwe-i18n ngaphambi komkhenkce ekulindeleke ukuba uqale kwimpelaveki ezayo. Ukuba ufuna ukulandela iqonga le-GNOME 40, eli lelona xesha lilungileyo lokuqala ukuvavanya izicelo zakho okanye izandiso, utshilo u-Abderrahim Kitouni.
Kufuneka iqatshelwe ngokukodwa ukuba ulungelelwaniso ngokuthe nkqo lwezinto lishiya igumbi lombono othe tye ngakumbi kunxibelelwano lomzobo. Ukuhamba ngephedi yokuchukumisa kunokuba yinto yendalo ngakumbi, ngokusekwe kwimpendulo yomsebenzisi.
1 Iimpawu ezintsha eziphambili zeGnome 40 beta
1.1 Khuphela kwaye uvavanye i-Gnome 40 beta
Iimpawu ezintsha eziphambili zeGnome 40 beta
Ngokumiliselwa kwale nguqulo ye-beta yendalo esingqongileyo, kuyacaciswa ukuba IGnome Shell igqibile ukuyila kwakhona indawo yokujonga kuqala, ulwandiso oluhlisiweyo ngoku lukhubazekile ngokungagqibekanga, nolunye uphuculo.
ngaphandle koko uhlaziyo olukhulu lwenziwe kwi-Mutter, kubandakanya ukumiliselwa kweXWayland kwimfuno, imowudi yokuxhasa imo yenkxaso, indawo ethe tyaba yokusebenza.
Kwakhona, sinokuyifumana loo nto Ukudityaniswa kwe-GVFS kunye nokuphuculwa kokusebenza kwefolda kuGoogle Inenombolo enkulu yeefayile, ukongeza ifolda yedrayivu ekwabelwana ngayo.
Kwaye umphathi weNautilus wefayile uphucule ukugqitywa kwethebhu kwindawo yokungena, ukuphuculwa kwencoko yababini.
Olunye utshintsho eziza kuvela kolu hlobo lutsha zezi:
uphuculo olwahlukeneyo lokuguqula kwisibali seGNOME (amaza, iiveki, iinkulungwane, amashumi eminyaka)
I-GTK 4.1 ihlanganiswe ngezixhobo zayo ezahlukeneyo kunye nophuculo
Inguqulelo yeGnome 40 ibhengeziwe ngoMatshi 24, 2021, kodwa umhla unokutshintsha ngokokukhula. Uhlobo olufanelekileyo kufuneka lubekhona ngoMgqibelo, nge-13 Matshi Ngokwekhalenda esemthethweni, xa ikhowudi iya kubanda kwaye akukho zixhobo zitsha zinokongezwa.
Njengesikhumbuzo, iProjekthi yeGnome, iqela lophuhliso lwemo yendalo yeofisi ligqibe ekubeni emva kwenguqulo 3.38 (ekhutshwe ngoSeptemba), i-3.40 iya kuba yi-40, njengophawu lwendaleko enkulu.
Emva kweenyanga ezininzi zokuhlola kuyilo, iqela leGnome Shell lazisa ukuba utshintsho olukhulu luya kwenzeka ngokukhutshwa kweGnome 40 ngentwasahlobo yowama-2021.
Okokugqibela, kwabo banomdla wokukwazi funda ngakumbi ngayo, ungajonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Khuphela kwaye uvavanye i-Gnome 40 beta
Kulungiselelwe abo banomdla wokuvavanya le nguqulo ye-beta yento eza kuba luhlobo olulandelayo lweGnome 40, kufuneka bazi ukuba ngexesha lokwenza olu papasho kuphela eIkhowudi yemithombo iyafumaneka ukuze idityaniswe.
Ikhowudi inokukhutshelwa kule khonkco.
Ngakolunye uhlangothi, kwabo banomdla kwiiphakheji ezithile, unokufumana iikhowudi zomthombo ngokwahlukeneyo kule khonkco.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, abaphuhlisi bokusingqongileyo bakwenzile ukuba bafumane umfanekiso we-Gnome OS esele ilungiselelwe njenge-installer yokuvavanya nokudlulisa izandiso ngale nguqulo intsha ye-beta yeGnome 40.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » IGNOME 40 beta iyafumaneka ngoku
I-NetworkManager 1.30.0 ifika ixhasa i-WPA3 Enterprise Suite-B kunye nokunye
Isiqalisi sewayini i-1.4.46 sele ikhutshiwe kwaye yeza nokuphuculwa okuninzi